Ra’iisul-wasaaraha Xukumadda Federaalka ah Soomaaliya oo ku baaqay in dadkii ka barakacay Gaalkacyo ay dib u laabtaan[Cod/Masawiro]]
November 18, 2016 - Written by Editor
Gaalkacyo:-Ra’iisul-wasaaraha Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Dr.Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, Madax weynaha dowladda Puntland iyo Madaxweynaha Gal-Mudug ayaa maanta tegay goobaha furimaha ciidamada ee ku yaal galbeedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug si loo kala qaado ciidamada.
Ra’iisul-wasaaraha Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Dr.Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo waxaana uu kulamo gaar gaar ah la yeeshay Odayaasha iyo siyaasyiinta ka soo kala jeeda Gal-Mudug iyo Puntland isagoona kala hadlay in la dhaqan geliyo xabada joojin laga gaaray dagaalka Gaalkacyo.
Ra’iisul-wasaaraha Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Dr.Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, Madaxweynaha dowladda Puntland iyo Madaxweynaha Gal-Mudug iyo Saraakiil ka tirsan labada dhinac ayaa s wada jir ah u tegi doona goobaha ay ciidanku isku horfadhiyeen ee Galbeedka Magaalada Gaalkacyo waxaan ay si rasmi ah u kala qaadi doonaan ciidamada iyagoo loo astayn doono goobo gaar ah.
Ra’iisul-wasaaraha Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka codsaday Dr.Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, Madaxweynaha dowladda Puntland iyo Madaxweynaha Gal-Mudug in ay fuliyaan heshiiskii lagu gaaray dalka Imaaraadka Carabta iyo Gaalkacyo ayna amar ku siiyaan Taliyaasha ciidanka in aan dagaal danbe ka dhicin magaalad Gaalkacyo.
Ra’iisul-wasaaraha Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Dr.Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, oo la hadlay warbaahinta marki uu tegay goobaha ay ciidanka Gal-Mudug iyo Puntland ay isku horfadhiyaan waxaa uu ku baaqay in ay dib u soo laabtaan dadkii ka qaxay Gaalkacyo maadaam ciidamada puntland iyo Gal-Mudug la kala durkiyey.
Hoos ka Dhagayso Ra’iisul-wasaaraha Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ku baaqay in dadkii ka barakacay Gaalkacyo ay dib u laabtaan